Xildhibaan Sharmarke Garaad oo bogaadiyay qorshaha cusub ee ay ku wada-shaqaynayaan hay’adaha ku hawlan dhamaystirka Dastuurka – Kalfadhi
Xildhibaan Sharmarke Garaad Saleebaan oo ka mid ah habdhawrayaasha baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ka mid ah wefdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland ayaa ka hadlay wada-shaqaynta guddiyada ku hawlan arrimaha geedi socodka iyo dib-u-eegista dastuurka JFS.
Xildhibaan Sharmarke ayaa soo dhoweeyay wada-shaqaynta guddiyadaas oo uu sheegay in ay gudbeen khilaafyo hore oo jiray, kuwaas oo ragaadinayay dhamaystirka Dastuurka.
“Waxaan aad ugu mahadnaqayaa in mudo badan oo guddiyada dhexdooda khilaaf ka jiray ay maanta intijaah usameeyeen sidii ay u wada shaqayn lahaayeen,” ayuu yiri Xildhibaan Sharmarke Garaad
Wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay rabaan in la sugo helitaanka xuquuqdooda asaasiga ah oo ay ugu horayso nabadgelyadu.
Xildhibaanka iyo wefdiga uu qaybta ka yahay ee ka socda golaha wakiillada Puntland ayaa shalay ka qaybgalay Shir ay guddiyada ku hawlan dhamaystirka Dastuurka JFS mudo 5 casho ah ku lahaayeen Djibouti.
Shirkaas ayaa lagu sameeyay qorshaha ay ku wada shaqaynayaan 3-da hay’adood ee qaabilsan dib-u-eegista Dastuurka oo kala, wasaarada Dastuurka, Gudiga la socodka iyo dib-u-eegista Dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa-banaan ee hirgelinta Dastuurka JFS.